October 2017 - Sawirrotv
Khayre oo Ku Sugan Safaaradda Turkiga (VIDEO)
Ra’iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyre oo ka hadlayay taageerada ay dowladda Turkiga siiso dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku falanqeeyay qodobadii ay ku heshiiyeen xili uu safar ku tegay Gudaha dalkaasi Turkiga. Hadalkaan ayaa Ra’iisul Wasaare kheyre waxa uu ka sheegay Munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 94-aad ee ka soo wareegatay xiligii …
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safaro shaqo uu ku kala bixiyay wadamada Uganda. Jabuuti iyo Itoobiya oo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in guulo ay ku soo dhamaadeen dhamaan safaradii dalalkaasi uu ku tagay waxaana uu sheegay in madaxdii uu …
Madaxweyne Farmaajo & Wafdigii uu Hogaaminayay (VIDEO)
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in guulo ay ku soo dhamaadeen dhamaan safaradii dalalkaasi uu ku tagay waxaana uu sheegay in madaxdii uu la kulmay ay ka aqbaleen sidii ay Soomaaliya uga gacan siin lahaayeen dagaalka cusub oo lala galayo ururka Al-Shabaab. MadaxweyneFarmaajo ayaa sidoo kale sheegay in marna Dowladda Soomaaliya aanay u dulqaadan doonin dhibka …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Gaaray Dalka Itoobiya Kana Hadlay Safarkiisa (VIDEO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi (Farmaajo) oo socdaal kooban ku maraya qaar ka mid ah dalalka ay ciidamada ka jooggaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray Magaalaa Addis Ababa. Madaxweynuhu ayaa waxa uu halkaas kula kulmay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Hailemariam Desalegn oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhinacyada amniga ee wadamada …
Booqashadii Farmaajo ee Addis Abeba (VIDEO)
Golaha Wasiirada ee dowladda federaalka ayaa waxay islamarkiiba Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka u magacaabeen General C/weli Jaamac Xuseen (Gorod). Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa ka aqbalay is casilaadda uu sameeyay Wasiirkiisii Gaashaandhigga, lamana sheegin waxa xilligan keenay in uu xilkaasi iska casilo.
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Gaaray Magaalada Kampala ee Dalka Uganda (SAWIRRO)
Madaxweynaha Soomaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo maanta safar ugu ambabaxay dalka Uganda ayaa isla maanta barqadii Gaaray magaalada Kampala. Safarka Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ku wehliyay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Saraakiil Ciidan, iyadoo Garoonka Diyaaradaha ee Aden Cade ay ku sii dhaweeyeen xubno ka tirsan Dowladda golaha Baarlamaanka. Taliyaha cusub ee Ciidanka …
Madaxda Dowlad Goboleedyada ee ku Shiray Magaalada Kismaayo oo soo Saaray Warmurtiyeed (Akhriso)
Warmurtiyeedka ay Maanta si wadajir ah u soo saareen madaxda Shanta Maamul goboleed ee dalka ka jira ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladaha waqtigan uu dalka marayo, arrimaha amniga iyo siyaasadda. Warmurtiyedkan oo aad u dheeraa ayaa ka koobanaa Sideed qodob, waxaana marka hore looga hadlay qarixii 14 bisahan Oktoobar ka dhacay Magaalada Muqdisho. Sidoo …
Goobtii uu ka Dhacay Qaraxii Isgoyska Zoobe oo Dayactir Lagu Bilaabay (SAWIRRO)
Wadadii qaraxa uu ka dhacay ee la oran jiray Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho, balse hadda loo bixiyay Isgoyska 14-ka October, ayaa waxaa lagu bilaabay dayactir, kadib markii Dowladda hoose ay dadaal badan ku bixisay sidii wadadaasi xaaladeeda caadi ay ugu soo noqon laheyd. Maanta oo Khamiis ah ayaa waxaa socdo dadaalada ku aadan in …